အိန္ဒိယနိုင်ငံ (သို့ ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ဦးတည်နေသည့် မုန်တိုင်းသတင်း။ | နစ်နေမန်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံ (သို့ ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ဦးတည်နေသည့် မုန်တိုင်းသတင်း။
ယခုအချိန်အခါမှာ အပူပိုင်းဇုံဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Tropical Cyclone) ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ချန်နိုင်းရဲ့ အရှေ့ ဘက်နေရာ မိုင် (၃၇၅) မိုင်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုလျက်ရှိနေပါတယ်။
အဆိုပါမုန်တိုင်းဟာ အနောက်မြောက်ဘက် (သို့ ) မြောက်ပိုင်းကို ရွေ့ လျားသွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့မိုးလေ၀သဌာနများကို ပြောဆိုပါတယ်။ စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမုန်တိုင်းဟာ ကြာသာပတေးနေ့ နဲ့သောကြာနေ့ တို့ မှာ အနောက်မြောက်ဘက် (သို့ ) မြောက်ဘက်သို့တဖြေးဖြေး ရွေ့ လျားသွားပြီး ကုန်တွင်းပိုင်းဆီသို့ဦးတည်နေပါတယ်။
ယခုအချိန်ကာလအထိ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ဆီသို့ဦးတည်ရန် အလားအလာ မရှိပါ။ သို့ သော် မြန်မာပြည် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၊ ရခိုင်ကမ်းမြှောင်ဒေသ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများနဲ့ရန်ကုန်မြို့ တို့ တွင် နေ့ စဉ်ရက်ဆက် မိုးရွာသွန်းမှုများနဲ့လေပြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ယခုမုန်တိုင်းအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားမှုရှိပါက ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမည်။
This entry was posted on Wednesday, April 15th, 2009 at 4:16 am and is filed under Posts.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.